Waa Maxay Kalsoonidu, Sidee Lagu Helaa Kalsoonida, Maxaase Burinkara Ama Dumin Kara Kalsoonida ? | Cadceed newssite
Waa Maxay Kalsoonidu, Sidee Lagu Helaa Kalsoonida, Maxaase Burinkara Ama Dumin Kara Kalsoonida ?
Ilaahay ayaa mahad leh Nebigeenana ( NNK) SCW Waxaan dhamaantiiba u soo tabinayaa salaan qaaliaya inata kadib. waxaan rabaa in aan waxyar ka iifiyo ama ka faaloodo” KALSOONIDU MAXAY TAHAY SIDEE BAASE QOFKU KUHELI KARA KALSOONIDA ” Kalsoonida naftu waa in qofku dareemo qiimaha ay nafta iyo noloshu lee dahay,ama naftiisu u leedahay waxyaabaha ku hareeraysan markaasna kalsoonidaa u turjumo dhamaan dhaqdhaqaayadiisa iyo hab dhaqankiisa isagoo aan khilaafayn caqliga iyo dhaqamada hufan dareemayna argagax iyo naxdin midna , dhaqamadiisa ayaana xukuma ee maya kuwa loo yeeriyo ama loo sheego Marka uu dhaqmaayo ama wax qabanayo wuxuu adeegsadaa awoodiisa aqooneed, hawlkarinimo iyo wax qabad, dhamaan waxii intaa kasoo hara waa kalsooni daro waxayna qofka ka dhigtaa qof dadka waardiye ka haya kee ku dayadaa ama ka hadhaa waxaana lasoo dersa murugo iyo deganaansho la` aan go`aankasta iyo talaaba kasta oo uu qaadayo. Taasi sababteedu waxay noqonaysaa in haddii uu qofku ufiirsan waayo wax qabadka naftiis ama habdhaqanka naftiisa in ay iman karto kalsooni daro.
1:MUHIIMADA KALSOONIDU ULEEDAHAY NAFTA.
A. Wexey qofa dhaxalsiisaa dhaqamo toosan lana jaan qaada xaaladaha ku hareeraysan noloshiisa.
B. Kalsoonida naftu waxay qofka ka ilaalisaa dhaqmada cadaawada iyo aargoosiga.
C. Qofka naftiisa ku kalsoon wuxuu awoodaa helida khibrad nololeed, barashada dhaqamo iyo xirfado iyo inuu si fudud uguul gaaro kana dheeraado guuldarada.
D.Kalsoonida naftu waxay qofka dhaxalsiisaa aragtiyo shaqo, howl-karnimo iyo cusboonaysiin qaababkiisa wax qabad.
2: QOFKA ISKU KALSOON.
A. Waa mid jecel wax is barida iyo helida khibrado cusub.kana hortaga dhaqamada xun xun ama qalafsan
B. Wa mid dadkiisa iyo dalkiisa jecel ismana buriyo cadaawadna lagama dareemo.
C. Wuxuu yaqaan siduu uga hortagi lahaa dhibaatooyinka iyo mushikiladaha nolosha wuxuuna caan ku yahay go`aamo wan-wanaagsan waxtarna leh.
D. Wuxuu la jaanqaadaa is bedelada ka dhacaya deegaanada ku hareeraysan
3: MAXAA KEENA KALSOONIDA.
A. Inaad aaminto In bulshadu ilaala kaa hayaan khalad kastoo kaa dhacana qorayaan.
B. Baqdin iyo deganaansho la` aan wax kastoo aad samayso una haysato inay garab marsanyihiin caadada dadkuna eedayn, canaan iyo liidid kuula imaandoonaan.
C. Dareemid inaad tahay shaqsi tabardaran suura galna aysan ahayn inuu wax hora marinkaro ama aaminto inaadan bulshada waxba ka ahayn.
Hadaba Kalsoonida nafta wexey qofka usuura gelisaa inuu la qabsado deegaanka ku hareeraysan haday noqonlahayd qoyska, shaqada iyo saaxiibadaba. Inuu nolosha dhex dabaasho kana qayb qaatasi uu guul ku gaadho.
Kalsoonida waxay qofka ka dhigtaa mid mutawaadic ah aqoona u leh heerka uu bulshadiisa ka joogo wexeyna qofka dhaxalsiisaa horumar joogta kaaso ka dhasha dulqaadka iyo dadaalkiisa. Wuxuu qiimayyaa noloshuu ka soo gudbey wuxuuna daahfeydaa mustaqbalkiisa wuxuu ku kalsoonyahay naftiisa kuna farxaa guulihiisa una hanqal taagaa mustaqbal fiican.
Kalsoonida naftu waxay u baahantahay in qofku aqoon buuxda uleeyahay naftiisa iyo xaaladiisa caafimaad, rumayona naftiisa isaga oo aan xaqirayn ama weyneyneyn,shaqsiyan sida uu yahay ama qaab abuuritaanka Alle.
4:DHIBAATOOYINKA KEENIKARA KALSOONI DARADA.
A. Hoos u dhaca maskaxda iyo Isku dhexyaaca dhanka fekerka .
B. Aqoon la`aanta, ilowga badan iyo guul daro shaqo.
C. Macsida faraha badan iyo Alle ka cabsi la`aanta qofka oo siyaada.
D. Firfircooni la` aanta iyo dhexgal xumida bulshada taasoo uu shaydaankuna ka faa’idaysanaayo dufaankan haysa qofka.
5:SIDEE AYUU QOFKU U DHISI KARAA KALSOONIDA NAFTIISA.
1:Qofku in uu unoqdo Allehii Abuuray isna waydiiyo maxaa laguu abuuray FAA’IDO MISE KHASAARE U JOOG.waa in uu Alle ku xidhnaadaa oo uuna ka caajisain wanaaga Alle faray xumaantan ka dheeraadaa.
2:Raja sami ku noolow waqtiyadoo idil samina ka muuji wax kastoo ka dhaca hareerahaaga.
3: Waa in uu qofku runta isku sheegaa oo kabaxaa khiyaaliga uu tusaayo Nafta run ka sheeg ujeedooyinka aad u nooshahay iyo wax qabdkiisa nolol maalmeed.
4: Ku kal soonow wax aad samayso si Dareen fiican aad uugu lahaatid isbadalka hab dhaqanka noloshaada ama samayndoonto.
5: Naftaada Bar sida loo dheho (maya), wixii aadan niyad ama waqti u hayn.kana dhaadhici oo ha is odhan dadku way kunici taasi waa may, waxay ku tusayasaa in dadku ku fahmaan oo la ogaankaro qof oran kara erayga MAY.
6: Fikradahaaga iyo wax qabadkaaga cadee oo tusdadka kana dhaadhici ama iibgee oo ismuuji in aad tahay qof lagu xisaabtamaayo oo la dareemi karo marka aad maqantahay iyo marka aad joogtidba.
7:Ahow qof nool muuji dareenkaaga dhegeyso,jirka ka hadal,aamus,tilmaan,ilmay,qosol. intaas oo dhami wax bay kuu sawiri doonaan naftaadan la sheekayso taas macnaheedu wax weeyi maskaxdaada kaasho adigoo dagan.
8:Nafta ha mashquulin oo dadku wax ay kaasheegaan haku mashquulin sababtoo ah wakhti ayaad iska luminaysaa kana faa’idaysi wakhtiga aad haysto mar uuna kusoomarayn ayaa imanaysa.
9: Qof diiran oo dagan ahay Dardarna ku socda han firadah dadka kale iyo fikirkaaga isgarab dhi oo samee qiimayn si ay kuu tusto in kaagu kafiican yahay kan ama kani kaafiican yahay oo aad fikir kale oo fiican raadisaa.dhiibona firikaaga kulamada aad ka qayb gasho ama marka aad la joogtid asxaabtaadad.
10:Ku dadaal in aad naftaada Qancio, raalina noqo xasiloonidana ilaali noloshaadana wanaaji oo ku dadaal sidii aad qayrkaa wax uula qabysan lahayd.